झुटो बोल्ने बच्चा पछि गएर टाठो हुने अध्ययनको निष्कर्ष
धनगढी,२८ पौष । क्यानडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा सानो उमेरमा झुटो बोल्ने बच्चाको पछि गएर संज्ञानात्मक क्षमता राम्रो हुने दाबी गरिएको छ । सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा झुटो बोल्ने बच्चा पछि गएर टाठो र बुद्धिमान् हुन्छ ।
विश्वविद्यालयका क्याङ ली भन्छन्, ‘आमाबुवा, शिक्षक र समाजमा सबै मानिस बच्चाहरू सानै उमेरदेखि झुटो बोल्दा पछि त्यसको परिणाम गम्भीर हुने बताउँछन् । तर अनुसन्धानको नतिजामा सानो उमेरमा झुटो बोल्ने र ठूलो भएपछि झुटो बोल्ने मानिसमा अन्तर भएको देखिन्छ । सानैमा झुटो बोल्नेको बुद्धि विकास हुन्छ ।’
जर्नल अफ एक्सपेरिमेन्टल चाइल्ड साइकोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रिस्कूलमा पढ्ने उमेरका ४२ बालबालिकामा अनुसन्धान गरे । उनीहरूले लुकामारी खेल्दा शुरूमा झुट बोल्ने क्षमता प्रदर्शन गरेनन् ।
पछि उनीहरूलाई दुई समूहमा बाँडियो जसमा केटा र केटीको संख्या बराबर थियो र उनीहरूको औसत उमेर ४० महिना वा लगभग तीन वर्ष थियो । चार दिनसम्म उनीहरूले एउटा खेल खेले जसमा उनीहरूले एक खेलौना वयस्कलाई छक्याएर एक हातमा लुकाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
बच्चाले वयस्कसँग झुट बोल्न वा ठग्न सफल भएमा उसलाई त्यो खेलौना राख्न दिइन्थ्यो । दुई समूहमा एक समूहमाथि परीक्षण गरिएको थियो भने अर्कोलाई कन्ट्रोल ग्रूप मानेर परीक्षण गरिएको थिएन ।
पछि उनीहरूलाई परीक्षण गरियो जसमा आत्मनियन्त्रण, मस्तिष्क सिद्धान्त, शासनात्मक क्रिया र अर्को व्यक्तिको मनसाय बुझ्ने जस्ता कुराको जाँच गरियो । झुट बोल्न र धोका दिन सिकाइएका बच्चाले जाँचमा कन्ट्रोल ग्रूपका बच्चाहरूभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरे ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले बच्चालाई टाठो र बुद्धिमान् बनाउनका लागि जानीबुझी झुटो बोल्न सिकाउनु चाहिँ गलत भएको बताएका छन् ।
आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट
टेलिकम भर्सेस एनसेल : कसको डेटा प्याक राम्रो ?
जहाज चढ्दा मोबाइल किन ‘एयरप्लेन मोड’ मा राख्नुपर्छ ? यस्तो छ जान्नैपर्ने कुरा
इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा बढ्यो
‘पोल बाहिर गोल जान दिदैनौं’:नेपाली कांग्रेस
कन्चनपुरको बेलौरीमा प्रहरी र तस्करबीच गोली हानाहान, एकको मृत्यु
प्रतिबन्धित विप्लव समूहले हिंसा छोड्यो, सरकारसँग ३ बुँदे सहमति
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने
आगामी शुक्रबार कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक